Diyaariyey microscope Slides
Glass diyaariyey microscope Slides
Caaga diyaariyey Slides microscope
Science diyaariyey Slides microscope
Cilmi barasho dhir Slide Diyaar
Cilmi barasho xayawaan diyaariyey Slides
Histology diyaariyey Slides
Anatomy diyaariyey Slides
Pathology diyaariyey Slides
Parasitology diyaariyey Slides
Slides Hidaha diyaariyey
Ayidhi diyaariyey Slides
Waa Maxay ayidhi
sheyga Eukaryotic hantidaan organelles cell xuub-ku xidhay oo ka mid ah fangaska iyo protists, halka noolaha-kuwaas oo dhammaantood prokaryotic sheyga-yihiin conventionally tilmaamay inay ka maqan organelles xuub-ku xidhay oo ka mid ah eubacteria iyo archaebacteria. Microbiologists dhaqan ahaan isku hallaysay dhaqanka, xayd, iyo microscopy. Si kastaba ha ahaatee, in ka yar 1% ka mid ah sheyga la joogo deegaan caadi noqon kartaa cultured in go'doomin isticmaalaya hab hadda.  Microbiologists inta badan ku tiirsan yihiin qalab biology kelli sida aqoonsiga xigxiga DNA ku salaysan, tusaale ahaan 16 rRNA xigxiga hiddo loo isticmaalo aqoonsiga bakteeriyada.
Ayidhi waa barashada noolaha oo dhan in aad u yar in la arko isha oo qaawan yihiin. Tan waxaa ku jira bakteeriya, archaea, fayrasyada, fangaska, prions, protozoa iyo algae, si wadajir ah loo yaqaan 'microbes'. microbes Kuwani door muhiim ah ee baaskiillada nafaqo, biodegradation / biodeterioration, isbedelka cimilada, biyuhy cuntada, sababla'aan iyo xakameynta cudurada, iyo bayotechnoolajiyadda. Thanks to ay miday, microbes la gelin karaa in ay ka shaqeeyaan siyaabo badan: samaynta daawooyinka nafaha lagu badbaadinayo, soo saaridda of biofuels, nadiifinta wasakhda, iyo soo saarida / cuntada processing iyo cabitaan.
Microbiologists baran microbes, iyo qaar ka mid ah daahfurtay ugu muhiimsan in ay xoojinayaan bulshada casriga ah ka dhashay cilmi of Mikrobiyoolojiistayaash caanka ah, sida Jenner iyo tallaalka, isagoo ka hor furuqa, Fleming iyo helitaanka penicillin, Marshall iyo aqoonsiga of xiriirka ka dhexeeya Helicobacter cudurka Pylori iyo boogaha caloosha, iyo Beytsuur Hausen, kuwaas oo loo aqoonsaday xiriirka ka dhexeeya virus papilloma iyo kansarka ilmo galeenka.
cilmi ayidhi ayaa, iyo sii wadaan in ay noqon, dhexe la kulmo badan oo ka mid ah himilooyinka hadda caalamka iyo caqabadaha, sida ilaalinta cuntada, biyaha iyo ammaanka tamarta ee dadka caafimaad dhulka a deggan. cilmi ayidhi sidoo kale kaa caawin doonaa in aad ka jawaabto su'aalaha weyn sida 'sida kala duwan yahay nolosha on Earth?', iyo 'ma jiraan nolosha meelo kale oo caalamka?
waqti Post: Dec-04-2018
isgoyska wadada Xiangyang iyo wadada Dongming in 300 koonfureed, degmada Hongqi, Xinxiang, Henan
Microscope Aqoonta Ujeeddo Of Mai ayaa ...
Telecentric Lens Qoondaynta
Hababka Production Carwada